Tie Ahwɛfo a Yehowa Apaw Wɔn No | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Monyɛ osetie mma wɔn a wodi mo anim no na mommrɛ mo ho ase mma wɔn, efisɛ wɔn na wɔhwɛ mo kra so.”—HEB. 13:17.
Dɛn na asafo mu mpanyimfo yɛ de hwɛ Onyankopɔn nguan?
Dɛn nti na ɛsɛ sɛ nguan no tie asafo mu mpanyimfo?
Adɛn nti na ɛnyɛ papa sɛ mpanyimfo no sintɔ nti, yɛbɛpo wɔn afotu?
1, 2. Adɛn nti na Yehowa ka sɛ ɔte sɛ oguanhwɛfo?
YEHOWA aka sɛ ɔte sɛ oguanhwɛfo. (Hes. 34:11-14) Saa asɛm yi ma yehu sɛnea ɔte. Sɛ obi yɛ oguanhwɛfo a, onim sɛ ne nguan nkwa hyɛ ne nsa. Enti ɔde wɔn kɔ baabi a wobenya aduan adi na wɔanya nsu anom (Dw. 23:1, 2); n’ani wɔ nguan no ho awia ne anadwo (Luka 2:8); ɔbɔ wɔn ho ban na aboa bi ankyere wɔn anwe (1 Sam. 17:34, 35); ɔde nguammaa no bɔ ne bo (Yes. 40:11); nguan a wɔayera no ɔhwehwɛ wɔn, na wɔn a wɔapira nso, ɔkyekyere wɔn akuru.—Hes. 34:16.
2 Tete no, na Yehowa nkurɔfo dodow no ara yɛ nguanhwɛfo ne akuafo. Enti bere a Yehowa kae sɛ ɔte sɛ oguanhwɛfo no, anyɛ den sɛ wɔbɛte ase. Ná wonim sɛ, sɛ obi wɔ nguan na wamma n’ani anku wɔn ho a, wɔrentumi nnyin prɔmprɔm fɛfɛɛfɛ. Nnipa nso hia Yehowa akwankyerɛ na wɔayɛ prɔmprɔm honhom fam. (Mar. 6:34) Sɛ nnipa nni ɔkannifo a ɔbɛma wɔn akwankyerɛ pa a, amanehunu nko ara. Esiane sɛ saafo no nnim papa nnim bɔne na wonni obi a ɔbɛbɔ wɔn ho ban nti, wɔayɛ sɛ “nguan a wonni ɔhwɛfo” a wɔnenam. (1 Ahe. 22:17) Nanso Yehowa ma ne nkurɔfo nea wohia biara.
3 Ɛnnɛ nso yehu nea enti a Yehowa de ne ho toto oguanhwɛfo ho. Yehowa da so ara hwɛ ne nkurɔfo. Ɛnde, momma yɛnhwɛ kwan a Yehowa fa so kyerɛ ne nguan kwan na ɔma wɔn nea wohia wɔ yɛn bere yi so. Afei nso yɛbɛhwɛ nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ n’akwankyerɛ ho.
OGUANHWƐFO PA NO APAW NGUANHWƐFO NKUMAA
4. Dɛn na Yesu yɛ de hwɛ Yehowa nguan?
4 Yehowa de Yesu ayɛ Kristofo asafo no Ti. (Efe. 1:22, 23) Yesu ne “oguanhwɛfo pa no,” na ɔte sɛ n’Agya pɛpɛɛpɛ. Yesu dɔ nguan no na ɔhwɛ wɔn. Ɔde ‘ne kra mpo too hɔ maa nguan no.’ (Yoh. 10:11, 15) Kristo agyede afɔre no ayɛ nhyira kɛse paa ama adesamma! (Mat. 20:28) Nea Yehowa pɛ ne sɛ obiara a ɔkyerɛ Yesu mu gyidi no ‘rensɛe na mmom obenya daa nkwa.’—Yoh. 3:16.
5, 6. (a) Henanom na Yesu apaw wɔn sɛ wɔnhwɛ ne nguan so? Dɛn na ehia sɛ nguan no nso yɛ? (b) Dɛn paa nti na ɛsɛ sɛ yetie asafo mu mpanyimfo?
5 Dɛn na nguan no yɛ de kyerɛ sɛ wogye Yesu Kristo tom sɛ Oguanhwɛfo Pa no? Yesu kae sɛ: “Me nguan tie me nne na minim wɔn, na wodi m’akyi.” (Yoh. 10:27) Ɛnde, dɛn na ɛkyerɛ sɛ nguan no tie Oguanhwɛfo Pa no nne? Ɛno ara ne sɛ wobedi n’akwankyerɛ so wɔ biribiara mu. Ɔkwan biako a wɔbɛfa so akyerɛ sɛ wodi n’akwankyerɛ so ne sɛ wɔbɛyɛ osetie ama mpanyimfo a Yesu apaw wɔn sɛ wɔmmoa no na ɔnhwɛ nguan no. Ná Yesu ahyɛ adwuma bi ase, na ɔkyerɛe sɛ n’asomafo ne n’asuafo bɛtoa so. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ‘wɔnkyerɛkyerɛ’ ne “nguan nkumaa” no na wɔmma wɔn aduan. (Mat. 28:20; monkenkan Yohane 21:15-17.) Bere a asɛmpa no mu retrɛw no, nnipa pii bɛyɛɛ Yesu asuafo. Enti Yesu hwɛe sɛ asafo ahorow no benya ahwɛfo a wɔn ho akokwaw.—Efe. 4:11, 12.
6 Akyiri yi ɔsomafo Paulo kyerɛw mpanyimfo a wɔwɔ Efeso asafo no mu ka kyerɛɛ wɔn sɛ honhom kronkron apaw wɔn sɛ ‘wɔnhwɛ Onyankopɔn asafo no so.’ (Aso. 20:28) Honhom kronkron na apaw asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ nso. Adɛn nti na yɛreka saa? Nea ɛwɔ Bible mu na wogyina so paw wɔn, na honhom kronkron nso na wɔde kyerɛw Bible no. Enti sɛ yɛyɛ osetie ma asafo mu mpanyimfo a, ɛkyerɛ sɛ yebu Yehowa ne Yesu sɛ Ahwɛfo kunini. (Luka 10:16) Eyi paa ne ade a ɛsɛ sɛ ɛka yɛn ma yetie mpanyimfo no. Nneɛma foforo nso wɔ hɔ a enti ɛsɛ sɛ yetie mpanyimfo no.
7. Dɛn na mpanyimfo no yɛ boa wo na biribiara ansɛe wo ne Yehowa ntam?
7 Sɛ asafo mu mpanyimfo retu wɔn nuanom Kristofo fo anaa wɔrehyɛ wɔn nkuran a, wɔde Bible mu nsɛm na ɛyɛ saa. Sɛ wɔretu anuanom fo a, wɔnkyerɛ wɔn sɛnea wɔmmɔ wɔn bra. (2 Kor. 1:24) Mmom wɔde Kyerɛwnsɛm no boa wɔn ma wɔn ankasa hu nea ɛfata sɛ wɔyɛ. Sɛ mpanyimfo yɛ saa a, ɛma biribiara kɔ so fɛfɛɛfɛ wɔanowɔano ma asomdwoe tena asafo no mu. (1 Kor. 14:33, 40) Bible ka sɛ mpanyimfo ‘hwɛ yɛn kra so.’ Saa asɛm yi kyerɛ sɛ nea ɛda mpanyimfo no koma so ne sɛ wɔbɛboa asafo no muni biara na biribiara ansɛe ɔne Yehowa ntam. Enti sɛ mpanyimfo no hu sɛ onua anaa onuawa bi reyɛ atu anammɔn bɔne bi a, wɔyɛ ntɛm hwim no. Sɛ nso wɔatu anammɔn bɔne bi dedaw a, wɔntwentwɛn wɔn nan ase; wɔboa no ntɛm. (Gal. 6:1, 2; Yuda 22) Anuanom, sɛ yɛhwɛ eyinom nyinaa a, ɛnsɛ sɛ ɛka yɛn ma ‘yɛyɛ osetie ma wɔn a wodi yɛn anim no’ anaa?—Monkenkan Hebrifo 13:17.
8. Dɛn na mpanyimfo yɛ de bɔ Onyankopɔn nguan ho ban?
8 Ná ɔsomafo Paulo yɛ ɔhwɛfo a Onyankopɔn nguan da ne koma so. Ɔkyerɛw ne nuanom a wɔwɔ Kolose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monhwɛ yiye: anhwɛ a obi de nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm ne wiase mu nneɛma so a ennyina Kristo so bɛfa mo nnommum.” (Kol. 2:8) Saa kɔkɔbɔ yi ma yehu ade foforo nti a ɛsɛ sɛ yetie mpanyimfo no afotu. Sɛ mpanyimfo hu sɛ obi pɛ sɛ odidi anuanom ase sɛe wɔn gyidi a, wɔma anuanom ani ba wɔn ho so. Ɔsomafo Petro kae sɛ “atoro adiyifo” ne “akyerɛkyerɛfo atorofo” bɛsɔre na wɔato “akra a wɔn ase ntimii no brada.” (2 Pet. 2:1, 14) Ɛnnɛ nso sɛ mpanyimfo no hu biribi saa a, ɛsɛ sɛ wɔbɔ anuanom kɔkɔ. Mpanyimfo no yɛ Kristofo a wɔn ho akokwaw a wɔafa tebea pii mu. Bio nso wɔn a wɔpaw wɔn mpanyimfo no yɛ anuanom a wɔte Kyerɛwnsɛm no ase na wotumi kyerɛkyerɛ nokware no yiye. (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) Mpanyimfo no ho akokwaw, wɔyɛ fakaa, na Bible abue wɔn adwenem, enti wotumi de afotu pa ma nguan no.
Sɛnea oguanhwɛfo bɔ ne nguan ho ban no, saa ara na mpanyimfo bɔ asafo no ho ban (Hwɛ nkyekyɛm 8)
OGUANHWƐFO PA NO HWƐ NE NGUAN, ƆBƆ WƆN HO BAN
9. Ɔkwan bɛn na Yesu fa so hwɛ asafo no nnɛ?
9 Yehowa nam n’ahyehyɛde no so ma anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa honhom fam aduan di mee. Yenya afotusɛm pii a egyina Kyerɛwnsɛm so wɔ asafo nhoma ahorow mu. Ɛtɔ da nso a, asafo no de akwankyerɛ besi asafo mu mpanyimfo so. Ebi wɔ hɔ a, ɔkyerɛw wɔn krataa. Ebi wɔ hɔ nso a, asafo no de soma ahwɛfo akwantufo kɔma wɔn. Eyi nyinaa yɛ akwan a Yesu fa so kyerɛ nguan no kwan.
10. Sɛ onua bi ne asafo no mmɔ bio a, asɛyɛde bɛn na ɛde to ahwɛfo no so?
10 Asafo mu mpanyimfo asɛde ne sɛ wɔbɛbɔ nguan no ho ban na wɔahwɛ wɔn. Sɛ yɛreka wɔn a ɛsɛ sɛ mpanyimfo no ani kũ wɔn ho paa a, ɛyɛ wɔn a wɔn gyidi ayɛ mmerɛw anaa wɔyare honhom fam. (Monkenkan Yakobo 5:14, 15.) Ebetumi aba sɛ wɔn mu bi ate ada na wɔne anuanom mmɔ bio. Sɛ Yehowa nguan no da mpanyimfo koma so ampa na wohu sɛ wɔn mu bi ayera a, wɔbɛyɛ nea wobetumi biara ahwehwɛ no. Wohu no a, wɔbɛhyɛ no nkuran sɛ ɔnsan mmra asafo no mu. Yesu kae sɛ: “M’Agya a ɔwɔ soro no ani nnye ho sɛ nkumaa yi mu biako bɛyera.”—Mat. 18:12-14.
MPANYIMFO SINTƆ—ƐSƐ SƐ YEBU NO SƐN?
11. Adɛn nti na ɛtɔ da a ɛyɛ den ma ebinom sɛ wobetie mpanyimfo no?
11 Yehowa ne Yesu yɛ Ahwɛfo a wɔyɛ pɛ. Nanso asafo mu mpanyimfo yɛ nnipa; wɔwɔ sintɔ ne mmerɛwyɛ. Eyi nti ɛtɔ da a na ayɛ den ama ebinom sɛ wobetie mpanyimfo no. Ebia wɔbɛka sɛ: ‘Mpanyimfo no yɛ nnipa a wɔtɔ sin sɛ yɛn ara. Enti adɛn na ɛsɛ sɛ yetie wɔn afotu?’ Ɛyɛ ampa, mpanyimfo no nyɛ pɛ nanso ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si wɔn sintɔ ne wɔn mmerɛwyɛ so.
12, 13. (a) Tete no, mfomso bɛn na wɔn a wodi Onyankopɔn nkurɔfo anim yɛe? (b) Adɛn nti na Yehowa ma wɔkyerɛw akannifo bi mfomso wɔ Bible mu?
12 Wɔn a Yehowa de wɔn dii ne nkurɔfo anim tete no mu biara nni hɔ a na ɔyɛ pɛ, na Kyerɛwnsɛm no ankatakata mfomso a wodii so. Sɛ yɛhwɛ Dawid sei a, Yehowa ma wɔsraa no sɛ Israel hene ma odii ne man anim. Nanso ne mmerɛwyɛ yii no hwee hɔ. Ɔfaa obi yere kum barima no pii so. (2 Sam. 12:7-9) Yɛnhwɛ ɔsomafo Petro nso. Ná odi akoten paa wɔ Kristofo asafo no mu nanso odii mfomso kɛse bi. (Mat. 16:18, 19; Yoh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Adam ne Hawa akyi no, onipa biara ntenaa asase so a ɔyɛ pɛ ka Yesu ho.
13 Adɛn nti na bere a wɔrekyerɛw Bible no, Yehowa ma wɔkaa akannifo bi mfomso wom? Yehowa yɛɛ saa de kyerɛe sɛ obetumi de nnipa a wɔtɔ sin akyerɛ ne nkurɔfo kwan ma ayɛ yiye. Nokwasɛm ne sɛ, efi tete nyinaa, nnipa a wɔtɔ sin na ɔde wɔn adi ne nkurɔfo anim. Enti ɛnnɛ yehu sintɔ anaa mmerɛwyɛ bi wɔ mpanyimfo no ho a, ɛnkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɔre tia wɔn anaa yɛde wɔn anim yɛ fam. Yehowa hwɛ kwan sɛ yebetie wɔn na yɛadi wɔn ni.—Monkenkan Exodus 16:2, 8.
14, 15. Yɛhwɛ sɛnea Yehowa ne n’asomfo a wɔtenaa ase tete no dii nkitaho a, dɛn na yebetumi asua afi mu?
14 Ehia paa sɛ yetie mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no. Adɛn ntia? Wo deɛ hwɛ kwan a Yehowa faa so maa ne nkurɔfo akwankyerɛ tete no de gyee wɔn fii amanehunu mu. Yɛnhwɛ ɛho nhwɛso biako. Bere a Israelfo fii Egypt no, sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɔma ɔman no akwankyerɛ a, na ɔde fa Mose ne Aaron so. Bere a Yehowa de ɔhaw a ɛto so du baa Egyptfo so no, na ehia sɛ Israelfo no di akwankyerɛ so na wɔanya wɔn ti adidi mu. Ná ɛsɛ sɛ wokum oguan yɛ aduan na wɔde mogya no srasra wɔn apongua ho ne n’atifi. Yemmisa sɛ Israelfo tee sɛ Yehowa ankasa de akwankyerɛ no rema anaa? Dabi, mmom Yehowa de besii Mose so, na ɔno nso de maa mpanyimfo no. Enti sɛ Israelfo no benya nkwa a, na ɛsɛ sɛ wotie mpanyimfo no. (Ex. 12:1-7, 21-23, 29) Ne tiatwa mu no, Mose ne mpanyimfo no gyinaa Yehowa ananmu de akwankyerɛ maa ne nkurɔfo. Ɛnnɛ nso Yehowa nam asafo mu mpanyimfo so yɛ saa ara.
15 Yɛreka yi ebia wokae mmere foforo wɔ Bible mu a Yehowa faa nnipa anaa abɔfo so de akwankyerɛ maa ne nkurɔfo gyee wɔn nkwa. Eyi nyinaa ma yehu sɛ ɛtɔ da bi a Onyankopɔn ma afoforo tumi a wɔde bɛkasa ne din mu na wɔama ne nkurɔfo akwankyerɛ de agye wɔn afi ahohia mu. Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ kwan sɛ Yehowa bɛyɛ saa ama ne nkurɔfo wɔ Harmagedon. Nanso ɛsɛ sɛ mpanyimfo a wogyina Yehowa anaa n’ahyehyɛde no ananmu nnɛ no hwɛ yiye paa na wɔamfa tumi a wɔwɔ no anhyɛ afoforo so.
‘KUW BIAKO, ƆHWƐFO BIAKO’
16. “Asɛm” bɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ aso tie?
16 Yehowa nkurɔfo nyinaa yɛ “kuw biako,” na yɛhyɛ “ɔhwɛfo biako” ase. Ɔno ne Yesu Kristo. (Yoh. 10:16) Yesu kae sɛ ɔne n’asuafo wɔ hɔ “nna nyinaa de kosi wiase nhyehyɛe no awiei.” (Mat. 28:20) Yesu te soro redi hene, na nsɛm a ebesisi ansa na wasɛe Satan wiase no nyinaa, ɔwɔ so tumi. Nea ɛbɛyɛ na yɛayɛ biako na yɛatena Onyankopɔn ahyehyɛde no mu dwoodwoo no, ehia sɛ yetie ‘asɛm bi wɔ yɛn akyi’ na yehu baabi a ɛsɛ sɛ yɛfa. “Asɛm” no bi ne Bible mu nsɛm a wɔnam Onyankopɔn honhom kronkron so kyerɛwee ne nea Yehowa ne Yesu de fa mpanyimfo so ma yɛn no.—Monkenkan Yesaia 30:21; Adiyisɛm 3:22.
Mpanyimfo bɔ ɔbaatankoro mmusua ho ban wɔ fekubɔne ho (Hwɛ nkyekyɛm 17, 18)
17, 18. (a) Dɛn na Satan pɛ sɛ ɔyɛ Yehowa nguan no? Awerɛhyem bɛn na yebetumi anya? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu?
17 Bible ka sɛ Satan “nenam sɛ gyata a ɔbobom apɛ obi amene no.” (1 Pet. 5:8) Satan redi Yehowa nguan ntɛntɛ te sɛ gyata bi a ɔkɔm de no a ɔrepɛ aboa bi akyere no awe. Nea Satan retwɛn ara ne sɛ oguan no bi bɛtew ne ho, na ɔde ne mu kua. Eyi nyinaa nti na ɛsɛ sɛ yɛne asafo no bɔ bere nyinaa na yɛbɛn ‘yɛn kra hwɛfo ne yɛn wɛmfo’ Yehowa. (1 Pet. 2:25) Wɔn a wobenya wɔn ti adidi mu wɔ ahohiahia kɛse no mu no, Adiyisɛm 7:17 ka sɛ Yesu “bɛhwɛ wɔn, na ɔbɛkyerɛ wɔn kwan akɔ nkwa asuti ho. Na Onyankopɔn bɛpopa wɔn aniwam nusu nyinaa.” Bɔhyɛ bɛn paa na ɛkyɛn eyi?
18 Besi ha yi, yɛahu sɛ asafo mu mpanyimfo wɔ adwumasono bi. Ɛne sɛ wɔbɛhwɛ nguan a wɔde ahyɛ wɔn nsa no. Ɛnde, asɛm a ɛsɛ sɛ ɔpanyin biara bisa ne ho ne sɛ, ‘Mɛyɛ dɛn ahwɛ Yesu nguan no so yiye?’ Eyi ne asɛm a yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu.